साइबर क्राइममा सर्वप्रथम केपि ओलिलाइ जेल हाल्नु पर्छ - info4nepal
साइबर क्राइममा सर्वप्रथम केपि ओलिलाइ जेल हाल्नु पर्छ
सबैलाइ नमस्कार ।
पछिल्लो समय , नेकपा नेता महेश ज्युले गर्नुभएको प्रस्ताव, सामजिक सन्जालमा आजभोली भाइरल छ ।
कुरा के भन्दा, देशभरी बाढी आएर जनजिवन अस्तव्यस्त छ र जताततै पानी जमेको छ । यो बेला केपि ओलिले पानीजहाज चलाउछु भनेको कुरालाइ व्यङ्ग्य हान्ने जनतालाइ साइबर क्राइम लगाउने र जेल हाल्ने अरे !
फेसबुकमा येस्ता पोस्ट गर्न नपाइने रे ।
एउटा कुरा, आज फेसबुक बेसहारा जनताको लागि आवाज दिने ठाउँ बनेको छ । आफ्नो अधिकारको कुरा हो। उचित भासा प्रयोग गरेर लेख्न पाइन्छ ।
ओलि ज्यु ठुला ठुला गफ मात्र दिएछी तेस्लाइ व्यङ्य नहानेर के गर्ने हो र?लगबग बर्स बित्न आट्यो चुनाब जितेको , खै के गरे ??
हिजो आफू प्रतिपक्षमा हुदा चाहिँ देशमा बाढी आउदा काङ्रेसले गर्दा बाढी आयो भनेर शेरबहादुरलाइ दोश दिने कम्युनिस्ट हरु आज उनिहरुलाइ व्यङ्य हान्दा येस्तो तानाशाही कुरा लेराउछौ ?? कति सम्म नामर्द छौ तिमि कम्युनिस्ट हरु । तिमिहरुको आचरण देखेर मलाइ मुखभरी थुक्न आउँछ ।
हिजो काङ्रेस सरकारमा हुदा येस्तो बोल्ने केपि ओलिलाइ साइबर क्राइम लगाएर जेल हाल सरकार , अनि तेस्पछी अरुलाइ हाल।
आफुले चाहिँ जे गर्दा पनि हुने, जस्तो रुपमा पनि बिरोध गर्दा हुने अनि अरुले गर्दा चाहिँ क्राइम हुने?? कस्तो नियत हो यो तिमिहरुको???
साच्चै नियम लागु गराउछौ भने , सर्वप्रथम केपि ओलि लाई जेल हाल सरकार । के के अभियोग लगाउन सक्छौ , तल हेर सरकार :
१) आफू प्रतिपक्षमा बस्दा अरुको खिल्ली उडाको अभियोगमा।
२)३ करोड जनता झुक्याको अभियोगमा।
३) आफू सरकारमा हुदा हत्यारा , चोर , गुन्डालाइ रिहा गरेको अभियोगमा।
४) देशभरिका बृद्ध बृद्धालाइ आशामा राखेर निराश बनाइ झुट बोलेको अभियोगमा।
येस्ता अभियोग करोडौ लगाउन सकिन्छ ओलि ज्यु अनि नेकपा सरकारलाइ ।
जनतालाइ बोल्न देउ । धेरै तानाशाही बन्न नखोज , ६२/६३ बिर्सेउ जस्तो छ तिमिहरुले । अति गरिसकेउ अब अत्याचार गर्न नखोज , सधै हामी जनता चुप लागेर बस्दैनौ ।
सधै देश र जनतालाइ झुक्काएर खाने काम नगर। ३ करोड जनता झुक्काएर लेराएको भोटको घमन्ड नगर ओलि सरकार । चाडै एउटा भित्तामा जाकिन बेर लाग्दैनौ ।
सुखमा मात्तिने र दुखमा आत्तिने राम्रो हैन ।
हो बाडी आउँछ , भुकम्प आउँछ , पहिरो जान्छ यो सबै प्रकृतिले गर्दा हो। कसैले कसैलाइ दोश दिन मिल्दैन । तर वास्तबमा भन्नुपर्दा, यो प्रकोप हैन। हामी आफैले निम्त्याएका हौ । खोला मिची मिची घर बनाएपछी , बस्तिमा पानी नआएर कहाँ जान्छ र? ?
मुकुन्द घिमीरेको टाउको काट्ने लाइ ३ लाख रुपैया तोकीयो भिडियो लाइभ हेर्नुहोस (सक्दो सेयर गर्नुहोस)
मोदिले भारतको उत्तरी सिमाना नेपालको सगरमाथा भनेको त होइन? – भिम रावल , पढ्नुहोस एकफेरी…
आम इन्सान से प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र , जरुर देखिए और शेयर करिए… जय हिन्द
ranjan August 28, 2018